Talaabooyinka Tilmaamaha oo Dhameystiran Sida Loogu Rakibay Tuwaalada Tuwaalka Wicitaanka-Jikada, Qasabadaha Buuxi Weelka, Qasabada Musqusha | WOW
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Talaabooyinka Hagaha oo Dhamaystiran Sida Loogu Rido Giraanta Tuwaalka
2020 / 12 / 21 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9192 0
Nolol maalmeedka, waxaad had iyo jeer la kulmi doontaa xaaladda rakibidda giraanyada tuwaalka. Haddii aadan khibrad u lahayn rakibidda giraanta shukumaanka, waxaan ka baqayaa inay dadku dareemaan lumis markay arkaan tilmaamaha rakibidda. Laakiin xaalada dhabta ah ayaa ah rakibida giraanta shukumaanka lafteeda waa mashruuc fudud oo fudud.WOWOWFAUCET wuxuu ina tusayaa sida loo geliyo giraan shukumaan musqusha. Sida ku cad hagaha maqaalkan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad 10 daqiiqo ku dhammayso si aad u dhammaystirto.
Qalabka aad isticmaali doonto ：
Ku marooji, saldhig
Faahfaahinta giraanta tuwaalka
Qalabka aan Suxfoonka lahayn
Waxaa laga sameeyey SUS 304 wax bir bir ah, baarka tuwaalka lagu maydho ee farsamada lagu safeeyey waa mid aan daxalaysan una adkaysanaya daxalka.
Sidoo kale way fududahay in lagu tirtiro oo lagu nadiifiyo maro qoyan.
Giraanta shukumaanka Matte madow waxay kuu keenaysaa rafcaan casri ah oo jilicsan gurigaaga waxayna dhameystireysaa nooca qurxinta badan.
Xagashada iyo faraha faraha u adkaysata, giraanta shukumaanka madoow ma soo bixi doono.
180 ° Wareeg Wareeg ah
Giraanta shukumaanka Jikada waxaa loo rogi karaa 180 °, oo ku habboon qalajinta tuwaallada si dabiici ah.
Maydhayaasha caaggu waxay oggol yihiin giraanta shukumaanka in lagu qabto xagal mana rogmanayso mana xoqayso gidaarka.
Go'aami dhererka rakibidda iyo booska giraanta shukumaanka:
Goobta rakibida guud ahaan: Meesha saxanka lagu dhaqo, labada dhinac ee musqusha, qolka qubeyska korkiisa, ku xigta kabadhada musqusha, oo ku xigta muraayadda waxtarka leh ee lagu rakibo albaabka suuliga gadaashiisa, iwm. Waa muhiim in la ciyaaro door muhiim ah iyo qurxin qurux.
Qaadashada dhulka tixraac ahaan, dhererka rakibidda: masaafada u dhexeysa giraanta shukumaanka iyo dhulka waa 0.9M-1.4M.
Qaado saxanka tixraac ahaan, dhererka rakibida: masaafada udhaxeysa giraanta shukumaanka iyo saxanka waa qiyaastii 0.55M.
Qaadashada barkadda qubeyska tixraac ahaan, dhererka rakibidda: masaafada u dhexeysa giraanta tuwaalka iyo weelka qubeyska waa 0.5M-1M.
Hadday ka soo horjeeddo tuubada musqusha, waa inay dhulka ka sarreysaa 1.6M.
Talooyin: Haddii ay carruur ku sugan yihiin guriga, haddii giraanta shukumaanka la rakibo si ay carruurtu ugu fududaato, waxaad go'aansan kartaa dhererka iyo booska iyadoo loo eegayo baahida dhererka carruurta.
1.Looen daboolka oo kaxee filimka
Isticmaal bambaano si aad u dabciso boorarka oo aad u soo saarto salka
Calaamadee booska saldhigga
U isticmaal qaybta wax lagu dhejiyo sidii calaamad u calaamadeynaysa aagga la qodayo
Cabir garoonka oo dalool godadka
Ka dib markaad isbarbar dhigto oo aad calaamadeyso booska qaybta, waxa la joogaa waqtigii hore loo qodo godadka barroosinka. Adeegso daloolin ballaadhan oo ballaadhan oo qoto dheer si aad ugu oggolaato barroosinka in la geliyo.
Isku hagaaji qaybta hoose oo adkee boolal
Isku hagaaji qaybta wax lagu dhejinayo ee daloolka, ka dibna isticmaal boolal lagu siiyay si aad ugu xajiso qaybta si adag derbiga.
Ku rakib filimka kuna adkee cidhifka hex
Qabso giraanta tuwaalka korka ilaa qaybta dhejinta. Dhex dhig wargelinta ku dhex taal giraanta salkeeda. Kahor intaadan hagaajin giraanta shukumaanka ee darbiga, fiiri ugu dambeeya oo hubi inay heer tahay. Waxa kaliya ee haray waa in lagu adkeeyo boolal la dhigay iyada oo lagu darayo Allen wrench ama qalabka wax lagu dhejiyo ee yar yar.
Hore:: Siyaabaha u horseedaya xulashada qasabadda qasabadda jikada ugu fiican Next: Tilmaamaha sida loo doorto tuubada musqusha ee saxanka wanaagsan
2021 / 02 / 03 4156